अनि बोर्डिङ स्कुलप्रति मेरो मोहभङ्ग भयो
माध्यमिक तहसम्म सरकारी स्कुलमै पढेँ । सरकारी स्कुलमा पढ्नु बाध्यताजस्तो थियो । रहर थिएन । रहर त बोर्डिङमा पढ्ने थियो । बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने साथीहरूको ठाँट र अभिभावकको अहम्‌को उचाइ त नाप्नै सकिन्थ्यो ।
मैले पढ्न सुरु गरेको स्कुल जहाँ धुलोले भरिएको साँघुरो कक्षाकोठामा ठेलमठेल गरेर बस्नुपर्थ्यो । कक्षामा एक/दुईवटा बेञ्चहरू थिए, जो आफ्नो उचाइभन्दा निकै अग्ला । अग्ला ।
अलि अग्ला साथीहरू असहज ढंगले तिनै बेञ्चमा बस्ने रहर गर्थे । कालो पाटीमा शिक्षकले किरिमिरी लेखेका अक्षरहरू राम्रोसँग देखिँदैनथे । अक्षर नबुझेर हामी खुब हल्ला गर्थ्यौं । शिक्षकलाई सुनाउनकै लागि भए पनि हामी पेटैबाट चिच्याउँथ्यौँ- क,ख,ग...।
शिक्षकहरू पनि विषयपिच्छे फरकफरक आउँथे । कुन सरको चित्त कसरी बुझाउने ? हामीलाई सकस लाग्थ्यो । हामीलाई कक्षाकोठाभन्दा चौरमा खेल्न औधी मन लाग्थ्यो । चौरमा खेलेको देख्नेबित्तिकै बैसको लट्ठीले सुम्ला उठ्ने गरी पिटाइ पाइन्थ्यो ।
धुलैधुलो । निकै उचाइमा झुन्डिएको पुरानो कालो पाटी । र, केही थान स-साना बालबालिकाले बस्नै नमिल्ने बेञ्चहरूबाहेक हाम्रो कक्षाकोठामा अरु कुनै सामग्रीहरू थिएनन् । वर्षभरि हामी के सिक्थ्यौँ, केही थाहा हुन्नथ्यो । ५ कक्षा पुगिसक्दा पनि हामीलाई मुस्किल हुन्थ्यो कखरा, ए,बी,सी,डी चिन्न, भन्न र लेख्न ।
सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूले तलब राज्यको खान्छौँ । अरुका बालबालिकाको भविष्य निर्माणको जिम्मा लिन्छौँ । तर, आफ्ना बालबालिकाको भविष्य निर्माणको जिम्मा बोर्डिङलाई सुम्पिन्छौँ, किन ? यो देशका गरिब, बेरोजगार, पिछडिएका, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियत कमजोर भएका अभिभावकका बालबालिकाको अन्तिम विकल्प सरकारी स्कुल नै हुन् । सरकारी स्कुल, जहाँ झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिको भविष्य जोडिएको छ ।
कमजोर सिकाइको धरातलमा हुर्किएको विद्यार्थीको जीवनग्राफ ओरालैओरालो हुन्छ । आजका दिनसम्म यसको निरन्तरता छ । तर, यो किन र कहिलेसम्म ?
बोर्डिङ स्कुलको मोहभङ्ग
निजी अर्थात् बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न नपाए पनि शिक्षण अनुभवचाहिँ लिएको छु । गाउँका देखि सहरका बोर्डिङ स्कुलका नाडी छामिएको छ । घाँटीमा दाम्लोजस्तो टाई अनिवार्य । अंग्रेजी बोल्नैपर्ने बाध्यताको विशाल पर्खाल । कलिलो पिठ्युँमा १० केजीको पहाडजस्तो झोला । वाक्यका वाक्य रटेर ओकल्नुपर्ने, हप्तैपिच्छे परीक्षा, यस्ता अनेक अनिवार्यताको जगमा बनेको प्रणाली र प्रणालीको जाँतोमा पिसिएको कलिलो बालकको सिकाइ कस्तो होला ?
टाई लगाउनु, गह्रौँ झोला बोकाउनु, रटैया सूचना ओकल्न लगाउनु, अंग्रेजी नबोले जरिवाना तिराउनु त अधिकांश निजी स्कुलको परम्परा नै हो । जहाँ सिकाइको धर्म मरेको छ र बाँकी लास परम्पराको रूपमा स्थापित र स्थिर भइरहेको छ ।
परीक्षामा अंक ल्याउन लगाउने र प्रमाणपत्र थमाउनेबाहेक निजी स्कुलले खासै अभिभावकको लगानीअनुसार प्रतिफल फर्काउन सकेका छैनन् । ग्रेड र प्रमाणपत्रको गुलियोमा अभिभावक भुलेका छन् । अनि यी स्कुललाई कसरी गुणस्तरीय भन्ने ? यस्तो तरिकाले हाम्रा नानीहरूको ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिको विकास असम्भव छ । फरक यत्ति छ, सरकारीभन्दा निजी स्कुलका विद्यार्थीहरूको रटाइको दर बढी छ । के रटाइ र भट्याइ नै आजको युगको आवश्यकता हो ? हामीले रटाएर पास गराएका विद्यार्थीको गन्तव्य कता छ ?
निजी स्कुलको यस्तो संविधान मलाई मन परेन । शिक्षण गर्न मन लागेन । सरकारी स्कुल पढ्दा 'वा बोर्डिङ स्कुल !' भन्ने लाग्थ्यो । शिक्षक हुँदा मोहभङ्ग भयो र सरकारी स्कुलमा २ वर्ष शिक्षण गर्न हानिएँ ।
दास उत्पादन गर्ने स्कुल बन्द गरौँ
सरकारी स्कुलको शिक्षक हुँदा शिक्षकका दु:ख, शिक्षकका बहाना, शिक्षकका परिबन्द, शिक्षकको राजनीति, शिक्षकको क्षमता र शिक्षकको इमानदारीलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएँ । लाखौँ शिक्षकमध्ये हरेक स्कुलमा केही न केही गरौँ भन्ने केही शिक्षकहरू पक्कै भेटिन्छन् । थिए । छन् । हुनेछन् ।
तर, हामीमाझ अर्का थरी शिक्षक पनि छन् । नभेटिनुपर्ने, जो भेटिन्छन् । शिक्षक भन्नै नसुहाउनेको हातमा लाखौँ अभिभावकले आफ्ना बालालिकाको भविव्य सुम्पिनुपरेको छ । यस्ता शिक्षकहरूलाई वास्तवमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नभेटाउनुपर्थ्यो । अनेकौँ संर्घषको पहाड चढेर स्कुलमा आउने बालबालिकाले नभेट्नुपर्थ्यो । तर, विडम्बना भन्न पर्छ, यस्तै शिक्षकको जगजगी ज्यादा छ यहाँ ।
दोषी को, यस्ता शिक्षक कि प्रणाली ? दुवै हुन् । शिक्षकको गरिमा नबुझ्नेहरूले अरु नै पेसा रोजिदिनुभएको भए उहाँको जिन्दगीको दायरा झन् फराकिलो हुन सक्थ्यो । शिक्षकजस्तो उच्च सम्मानित पेसालाई मानिसहरूले हेयको भावले हेर्दैन थिए होलान् ।
शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रणाली यी यावत समस्याको मुख्य जड नै हो । शिक्षक नियुक्ति प्रभावकारी विधि, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका लागि निरन्तर तालिम तथा सहयोग कागजमा छ । व्यवहारमा छैन । व्यवहार नसच्चिएसम्म शिक्षामा व्यापार भइरहनेछ । लथालिङ्ग भताभुङ्गका समाचारहरू आइरहने छन् । गीतहरू बजिरहनेछन् । शिक्षकहरूले तालीभन्दा गाली पाइरहनेछन् । मुलुकमा निष्क्रिय नागरिकको उत्पादन र पलायन भइरहनेछ ।
म छ वर्ष पुगेपछि बाले स्कुल भर्ना गर्नुभयो । तर, मलाई स्कुल मजा लागेन । सुरुवातका दिनमा मलाई स्कुल जानभन्दा खेतमा काम गर्न, वस्तुभाउ डुलाउन रहर लाग्थ्यो । सजिलो लाग्थ्यो । अहिले सम्झिन्छु- स्कुल पठाउन मेरा बाआमाले कम्ता मेहनत गर्नुपरेको थिएन ।
'तेरो दाइ पढेर मास्टर होला, तँ हली होलास् ।' यो डाइलग मेरा बाआमाले सयौँ पटक मेरो कानमा सुनाए । शिक्षकले पनि सयौँ पटक सुनाए, नपढेपछिको जिन्दगीको दारुण कथा । किताब घोक्नैपर्ने रहेछ, अबोध नानीको मानसले स्वीकार गर्‍यो ।
जति कक्षा चढ्दै गएँ, म खेत, आगन, गोरुगाढाबाट उत्तिनै टाढिँदै गएँ । शिक्षकले दिने होमओर्कले थिचिन थालेँ । ३ घण्टे परीक्षा र परीक्षामा जित्नका लागि बाँच्न थालेँ । घरछेउको सिमलको रुखमा चराहरूले गाउने गीतहरू सुन्ने फुर्सद गुम्यो । पाखामा फुल्ने रंगीविरंगी फूलको रंगहरू निहाल्ने समय हरायो । चराहरूको गीत, फूलको सुगन्ध सबै विराना हुँदै गए ।
उमेर बढ्दै गयो । कक्षा थपिँदै गए । खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि परीक्षा र होमवर्कको बाहाना देखाएर माटो छोइएन । आमाबालाई सघाउन पनि अल्छी लाग्यो । बाआमाको मेहनतले फलेको मानो निसङ्कोच खाने, स्कुल धाउने र कक्षा चढ्ने क्रम निरन्तर चलिरहयो ।
स्कुलमा के सिक्यौ ?
खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा भुटिइरहेको युवालाई सोध्नुहोस्-
विश्वविद्यालयमा के सिक्यौ ?
युरोपमा चर्पी सफा गरिरहेको युवालाई सोध्नुहोस्
र सोध्नुहोस् प्राथमिक तहमा पढ्दै गरेको नानीलाई-
तिम्रो सपना के हो ?
उसले पनि भन्नेछ, 'युरोप जाने । अमेरिका जाने । कतार जाने । मलेसिया जाने ।
अनि यत्तिका लागि स्कुलमा १० वर्ष समय खेर फाल्न जरुरी छ र ?
यत्ति लागि ऋणको भारी बोकेर विश्वविद्यालयको ढोका धाइरहन आवश्यक छ र ?
हामीले हाम्रा युवाको २५ वर्ष के गरी बिताउन बाध्य बनाइरहेका छौँ ? यी सुनौला वर्षहरूमा स्कुलहरूले के सिकाइरहेका छन् ? विश्वविद्यालयले के सिकाइरहेका छन् ? शिक्षाको नाममा लाखौँ युवाको जिन्दगीमाथि राजनीति किन ? कहिलेसम्म गरिरहने ?
यतिका वर्ष समय, सम्पत्ति तथा श्रम लगानी गरेर युवाले पलायन हुनकै लागि प्रमाणपत्र पाइरहेका छन् । पढेर न सीप हासिल हुन्छ, न काम गर्ने ठाउँ दिइन्छ । साक्षरताका लागि २ वर्ष पढे पुग्छ । २५ वर्ष खेर फाल्न जरुरी छैन । हरेक व्यक्ति विशेष हुन्छ । व्यक्तिलाई विशेष बनाउने ल्याकत स्कुलसँग छैन । राज्य जिम्मेवार बन्दैन भने त्यस्ता स्कुल बहिष्कार गर्दा फरक पर्ला र ?
मुलुकलाई चाहिने नागरिक उत्पादन नगर्ने शिक्षामा किन यत्रो लगानी गर्ने ? आरनआँगन, पाखोपखेरो बेचेर ३ घण्टे परीक्षाका लागि तयार बनाउने कि आरन आँगनमा सम्भावना देख्ने दृष्टि दिने ? बालबालिकालाई खास होइन, दास बन्न सिकाउने शैक्षिक व्यवस्थालाई अब बोक्न सकिन्न ।
(लेखक इनोभेटिभ पाइलाका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०७७, १६:१४:००